Ukubuyekezwa kwe-Oranum | Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubuyekeza kwe-Oranum
Ukubuyekeza okuphelele kwe-Oranum
U-Oranum usanda kuqala ukunikeza ukufundwa kwengqondo e-United States, noma kunjalo bebelokhu behlinzeka ngokufundwa ezweni labo lasePoland iminyaka eminingi. I-Oranum ihlukile ngoba inikela kuphela ngokufundwa okususelwa kwikhamera yewebhu. Eyaziwa nangokuthi "ingxoxo yevidiyo." Noma ungenayo i-webcam usengakwazi ukufundwa, ungabuza imibuzo yakho ngokuthayipha ebhokisini lengxoxo, kepha uma unekhamera yewebhu nombhobho ungakhuluma ngqo nesifundi sakho se-psychic esheshisa izinto , futhi bengicabanga ukuthi ubuchwepheshe obuhle impela. Izangoma eziningi engikhulume nazo zazinembile futhi zanginikeza izeluleko ezinhle.
Banenqubo ehloniphekile yokuhlola ama-psychics, noma ngabe namanje ayikabi kuhle Umthombo we-Psychic or AskNow. Kungiphathe kabi ukuthi abanakho ukwesekwa kwamakhasimende ngocingo. Lokhu kufanele kube yisidingo kunoma yiliphi ibhizinisi. Ngithole ukwesekwa kwamakhasimende abo nge-imeyili kuphendulwe kungakapheli ihora kodwa akukho okufana nokukwazi ukukhuluma nomuntu ophilayo ukuze izinkinga zakho zixazululwe ngokushesha. I-Oranum isiyonke inobuchwepheshe obupholile, inqubo enhle yokuhlolwa kwengqondo kepha insizakalo yabo yamakhasimende ayinaso isikhathi esikhulu.
U-Oranum waqala ezweni lakubo lasePoland. Ku-2010 banquma ukwandisa e-United States. Bavula ngokusemthethweni amakhasimende abo e-US ngo-Ephreli 2011. Yilabo bokuqala, futhi kuphela isevisi ye-web-cam esekelwe yinkinga ye-psychic etholakalayo noma kuphi.
Inqubo yokuhlolwa kwengqondo ye-Oranum muhle kakhulu. Banama-psychics amaningi amahle, asezingeni, kepha akukuhle kangako njengezinye izinsizakalo zemilingo. Ama-Psychics enza inqubo yokuhlolwa eqinile ngaphambi kokuba anikeze ukufundwa ku-Oranum, kepha angizwanga sengathi bekuqinile kakhulu noma kukhethekile. Udinga ukuthi uqaphele ukuthi yimaphi ama-Psychics okhuluma nawo ku-Oranum.
Ngiyithanda kakhulu iwebhusayithi ka-Oranum. Kwakulula ukuhamba futhi ungasesha futhi uhlele ama-Psychics kalula. Ukukwazi ukubukela ividiyo koosiyazi ngaphambi kokufundwa kuyesabeka futhi kukuvumela ukuthi uzizwe unengqondo ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthintana nabo. Ungabuka amashejuli we-Psychic futhi uzihlelele nokufunda kunoma yiluphi uhlelo lwe-psychics.
I-Oranum ayinikeli izaphulelo kumakhasimende amasha, kepha zinendlela eyingqayizivele yokukuvumela ukuthi uzame insizakalo yazo. Ngesoftware yabo yokuxoxa ngevidiyo ungaxoxa nanoma iyiphi i-psychic online, mahhala mahhala inqobo nje uma ufisa. Uma uthatha isinqumo sokuthi uyayithanda leyongqondo ungakhokha ukuze kufundwe yibo. Bengicabanga ukuthi lokhu kupholile futhi kukuvumela ukuthi uzizwe kahle nge-psychic osuzokhokha, ngaphambi kokuba ukhokhe. Noma kungekho izaphulelo ngizizwa sengathi lokhu kubaluleke ngokwanele ukuthi awudingi isilinganiso esinephulelo.
Ukuntuleka kokusekelwa ngocingo kuyangiphazamisa. Ngikholwa ukuthi noma yiliphi ibhizinisi kufanele libe nenombolo enhle yokuhlinzeka ngamakhasimende ngocingo. I-Oranum inikezela ngokusekelwa kwamakhasimende nge-imeyili, futhi baphendula ngokushesha kepha akufani nokukwazi ukuthatha ifoni futhi ukhulume nomuntu wangempela. Uma i-Oranum isebenzisa ubuchwepheshe bayo be-webcam ekusebenzeni kwamakhasimende ngingajabula kakhulu.